Akwụkwọ Laura Swanson na Martech Zone |
Edemede site na Aha ya bụ Laura Swanson
Aha ya bụ Laura Swanson
Fraịde, Septemba 25, 2015 Fraịde, Septemba 25, 2015 Aha ya bụ Laura Swanson
Logwa ndị ahịa ọ bụla ihe ịzụ ahịa abụghị echiche ọhụrụ. Chee echiche banyere mmetụta ị na-enweta mgbe ị gara n'otu ụlọ oriri na ọ localụ localụ na onye na-elekọta nwanyị na-echeta aha gị na ihe ị na-emebu. Ọ na-adị mma, nri? Nhazi onwe onye bụ banyere ịmaliteghachi aka ahụ, na-egosi onye ahịa na ị ghọtara ma lekọta ya. Teknụzụ nwere ike ime ka usoro ịhazi onwe gị, mana ịhazi onwe gị bụ usoro na uche nke pụtara ìhè na mmekọrịta ọ bụla nke ndị ahịa gị